सत्ताभन्दा मुलक, व्यवस्था र संविधान प्रधान – Sourya Online
उहाँले माग्ने हो आममाफी, दिने होइन
चमिना भट्टराई २०७८ साउन १० गते ५:५० मा प्रकाशित
डा. बेदुराम भुसाल, नेता नेकपा एमाले
नेकपा एमाले यति बेला न फुट्ने न जुट्ने अवस्थामा छ । एकातिर पार्टी संस्थापन रूपमा चलेको छ भने अर्कोतर्फ समानान्तर कमिटीका रूपमा चलेका छन् । लामो समयदेखि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका बीचमा पार्टीभित्र द्वन्द्व चर्किएको छ । पार्टी भित्रको द्वन्द्वका कारण आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकार वरिष्ठ नेता नेपालको समूहका केही सांसद्को साथमा ढालेर कांग्रेसले सत्ता सम्हाल्ने अवसर पाएको छ । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेको एमालेको अबको दिनमा असरी अगाडि बढ्ला ? यही सेरोफेरोमा एमाले नेता डा. बेदुराम भुसालसँग सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको संवादको सम्पादित अंश :